Free Download Adobe Flash Professional CS5.5 u Mac | MacArsenal
> Resource > Mac > Adobe Flash Professional CS5.5 u Mac
Adobe Flash CS5.5 Professional u Mac
Adobe Flash Professional CS5 waa software xoogan si ay kuu siiyaan qoraalka is-dhexgal iyo gaarsiinta ee caadiga ah warshadaha. In this version cusub, la rajeenayo in ay xal u heli karo qaar ka mid ah dhibaatooyinka file oo kaa caawinaya in aad u furan oo aan qaarkood badbaadiyo files Flash Professional in CS5.5 si guul leh. Waxaa jira qaar ka mid ah qaababka cusub ee Adobe Flash Professional CS5.5, oo ay ku jiraan tusmada resizing, lagu hormariyo gacanta lakabka iyo code jeex maaraynta, iyo maktabadaha wadaago mashaariicda kala duwan ee shaashadda. Waxa kale oo ka mid ah qaar ka mid ah la rajeenayo in kale cayayaanka. Qiimaha aad $699.00 si ay u iibsadaan ama $ 199 si ay kor si version 11.5.1. Waxa ay taageertaa Mac OS X 10.7 / 10.5 Intel / 10.6 Intel.
Qoraalka guud ahaan qalabka iyo desktops
Adobe Flash Professional CS5 ku siinayaa khibrad immersive oo la yaab leh in ay soo bandhigaan guud ahaan kombiyuutarada shakhsi, shaashadaha iyo Qalabka telefoonada gacanta ee ku dhow oo dhan tirada iyo kacdoonkii.
Interface users soo hagaagaya
Waxaa jira qaar ka mid ah horumarinta ee interface isticmaala, oo ay ku jiraan cusub Code macloomaadkii guddi madax-ilaa bandhigay, daabacaan Settings sanduuq cusub oo wada hadal, updated guddi Project iyo guddi Document Guryaha oo la xoojiyay guddi Library.
Sida loo hagaagsan iPad Content si Mac